Long ကလက်ကိုင်နှင်းခေါင်မိုးထွန်ခြစ် - တရုတ် Richina
မော်ဒယ်အဘယ်သူမျှမ .: H483
extension အလျား: 4720mm
ဦးခေါင်းအရွယ်အစား: * 330mm 481
3 အပိုငျးပိုငျးတစျခုစီကိုအပိုင်းပိုင်းအဘို့အ 1500mm ရှည်လျားပြီးလူမီနီယံလက်ကိုင် anodized
နှင်းကျထွန်ခြစ်ခေါင်းကိုပစ္စည်းကို PC + ကို ABS composited, ဦးခေါင်းအရွယ်အစား 481 * 330mm ဖြစ်ပါသည်
သင့်ရဲ့အိမ်ခေါင်မိုးသန့်ရှင်းရေးနေစဉ် groun အပေါ်လုံခြုံစွာရပ်
စံပြပလတ်စတစ် Blade ကိုရှာဖွေနေ ခေါင်မိုးနှင်းထွန်ခြစ် ထုတ်လုပ်သူ & ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း? ငါတို့သည်သင်တို့ဖန်တီးမှုအတွက်အကူအညီရရန်အကြီးအစျေးနှုန်းများမှာကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်ရေးရှိသည်။ လူအားလုံးတို့သည် Long ကသံမဏိကိုင်တွယ်နှင်းထွန်ခြစ်အရည်အသွေးကိုအာမခံဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့နှင်း၏တရုတ်မူလအစစက်ရုံခေါင်မိုးသန့်ရှင်းရေးအတှကျအပိုရှိပါတယ်။ သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းရှိပါကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်အခမဲ့ခံစားရပါ။
ဥယျာဉ် Tool ကိုနှင်းလယ်ထွန်ခြင်းကို
အကြီးစား-Duty နှင်း Brush
နှင်း Brush သည်ကား
နှင်း Brush ရေခဲပြင်ခြစ်
နှင်းသန့်ရှင်းရေး Tool ကိုသည်ကား
နှင်းဖယ်ရှားရေး Tools များ
နှင်း Tool ကို
ဆောင်းရာသီနှင်း Tools များ
Comfortable D-လက်ကိုင်နှင့်အတူ Poly နှင်းထက်တောင်ဦး
မိုးသည်းထန်စွာ Duty လမ်းဘေးရေခဲပြင် Chopper / ခြစ်
ညှိနှိုင်းမှုနှင့်အတူမိုးသည်းထန်စွာ Duty Rolling နှင်း Pusher ...